Umdlalo omusha we-e.tv eThekwini
ININGI labalingisi ababonakale emdlalweni othi Ifalakhe kuthiwa lizophinde libonakale emdlalweni othi Durban Unit oqoshwa yinkampani iStained Glass eThekwini
NOKUBONGWA PHENYANE | June 24, 2020
INKAMPANI esikhiqize imidlalo okukhona kuyo Uzalo, Ehostela nothi Ifalakhe, iStained Glass, sekuvele ukuthi imatasa ilungiselela ukuqopha omunye umdlalo eThekwini, othi Durban Unit.
Kulo mdlalo kuthiwa okuningi kuwona kuzogxila esibhedlela, asebeya emalungiselelweni okusiqeda okuzoqoshelwa kusona.
Umthombo weSolezwe ongashayi eceleni, uveze ukuthi kulo mdlalo kuzobonakala abalingisi abaningi abake babonakala emdlaweni othi Ifalakhe.
“Sekuqalile ukubizwa kwabalingisi kulo mdlalo, kuwona abazosebenza nabalingisi ababonakale emidlalweni yabo esike yabonakala.
“Okunye ngawo wukuthi unikwe isiteshi sakwa-e.tv njengoba besidinga umdlalo osa-telenovela. Abaphathi beStained Glass benza konke okusemandleni ukuthi lo mdlalo uhehe futhi bakhuluma eyokuthi bafuna ujatshulelwe ngabaningi uma usuqalile ukubonakala kwithelevishini,” kuchaza umthombo.
Ngisho umlingisi womdlalo Uzalo, uBaby Cele, engosini ayenza ohlelweni lukaDudu Khoza kuKhozi FM yokumemezela izinto ezenzeka endimeni yobumnandi, uke wakhuluma ngalo mdlalo.
Umthombo uqhube wathi okubi nje okucishe kwenzeka ngesikhathi abanikazi beStained Glass befuna abasebenzi wukuthi abaningi abakwiMbewu bafake izicelo zokuzosebenza nabo, okucishe kwenza ukuthi kusale kungekho muntu kulo mdlalo okubukeka ngathi ubhekene nezinkinga zokushiywa ngabalingisi.
“Kuze kwaphoqa ukuthi abaphathi beMbewu babhalalele iStained Glass bebanxusa ukuthi bangaqashi muntu oqhamuka kwiMbewu ngenxa yokuthi wonke umuntu usikaza ukushiya, obekuzobenza bangasali namlingisi onamava. Konke lokhu kwenzeka ngenxa yazo njalo izinkinga zemali kulo mdlalo njengoba iningi lingajabule ngemiholo,” kuchaza umthombo.
UNomfundo Zondi weStained Glass, uthe okwamanje ngeke baze bakhulume lutho ngokuthinta lo mdlalo.